ISinocare neMedlab Middle East 2020-News-Sinocare
Sinocare nge-Medlab Middle East 2020
Isikhathi: 2020-02-11 Hits: 375
IChangsha Sinocare Inc. ibambe iqhaza kwi-MEDLAB Middle East 2020 eDubai, phakathi kuka-2/3/2020 ~ 2/6/2020.
IMEDLAB iyimbukiso nezinkomfa ezihamba phambili zaselabhoratri nezokuxilonga emhlabeni jikelele, lo mhlangano waminyaka yonke waselebhu uhehwe ababonisi abangaphezu kwama-600 nababekhona abangaphezu kuka-25,000 abavela emazweni ayi-129+.
ISinocare inokuhlangenwe nakho kweminyaka eyi-18 phakathi kwe-R & D, ukukhiqizwa nokuthengiswa kohlelo lokuqapha i-glucose yegazi. Ikakhulukazi, phakathi nale minyaka emibili, imikhiqizo yethu i-PCH 100 (Portable HbA1c Analyzer), i-PABA 1000 (i-ACR Analyzer) yakhishwa emakethe yamazwe omhlaba ngokulandelana, iSinocare ifinyelela kunhlangano yamazwe omhlaba i-POCT kancane kancane.
Ku-MEDLAB 2020, iSinocare ikhipha ezinye izipho ezimbili ezinkulu zeziguli zethu ezinesifo sikashukela nezinye izifo ezingalapheki emhlabeni wonke, ezibizwa nge-AGEscan ne-ICARE-2000.
I-AGEscan iyi-advanced glycation end products fluorescence detetor, ngokusebenzisa ukuskena kwamehlo okungangenisi futhi okubuhlungu, ngemuva kwemizuzwana engu-6 ingathola imiphumela, yokubikezela ubungozi besifo sikashukela eminyakeni emi-5-10 ezayo. I-AGEscan iyisinqumo esihle kubantu abangatholakali abanesifo sikashukela kanye nesandulela-sikashukela ukwenza ukuhlolwa kokuqala, kanye neqembu elinempilo ukwenza ukuhlolwa kwesifo sikashukela.
Ama-AGEs yisici esizimele se-pathogenic esithinta ukwenzeka nokuthuthuka okusimeme kwesifo sikashukela esihlotshaniswa ne-proinsulin / insulin. Njengoba iminyaka ikhula, ama-AGE aqoqa kancane kulensi yeso, futhi izinga lama-AGE liyasheshiswa ekumelaneni ne-insulin, umthethonqubo we-glucose okhubazekile kanye neziguli ezinesifo sikashukela. Ngenxa yezimpawu ezinzile nezingaguquguquki zama-AGE, "inememori" ephakeme. Uma kuqhathaniswa nezinye izinkomba zokuqapha isifo sikashukela, amazinga aphezulu e-AGE angakhombisa ukulimala okwandayo koshukela wegazi ongajwayelekile kanye nengcindezi ye-oxidative isikhathi eside. Ingasetshenziswa njengezimpawu zokuxwayisa zangaphambi kwesifo sikashukela nezinkinga.
I-iCARE-2000 iyi-analyzer ezenzakalelayo enhlobonhlobo esebenza kalula. Ngokuzayo, iziguli ezinezifo ezincane zizokhuthazwa ukuthi zivakashele izikhungo zezokwelapha ezisezingeni lomphakathi ukunciphisa umthwalo osindayo wezibhedlela ezinkulu. I-iPOCT izokwenzeka kancane kancane ezibhedlela zasemakhaya nasezikhungweni zezokwelapha ezisezingeni lomphakathi lapho kungaba yinto efanelekile ukuhlangabezana nezidingo zokuhlolwa kwevolumu ephansi kanye nokuntuleka kwabasebenzi abanamakhono.
ICARE-2000 isebenzisa uketshezi lobuchwepheshe besigaba esingenza ukusebenza okuhle okuqinisekisa imiphumela ngokunembe kakhudlwana. Uma kuqhathaniswa nemishini emikhulu yezokwelapha, i-iCARE-2000 iyasusa okuthile, isebenzisa amakhadi we-reagent asengakagcwaliswa, iqeda ukuqhutshwa kwensimbi, ngakho-ke asikho isidingo sezinto ezingezona ezisisisekelo zomshini nezamanzi, ngenkathi kugcinwa isilawuli se-optical nesezinga lokushisa systems, kwelinye igama, asikho isidingo sokulinganisa noma ukuhlanza uketshezi. Ngaphezu kwalokho, kunamakhadi we-16 ahlanganisayo e-reagent & i-37 basic biochemical and coagulation Izinkomba ze-iCARE-2000, futhi kunezinkomba eziningi ezizotholakalela lolu hlobo lomkhiqizo.
"Ngokusebenza ngothando, sithuthukisa izinga lempilo yeziguli ezinesifo sikashukela nezinye izifo ezingalapheki." Kusho umongameli wethu, uMnu Li.
ISinocare ibilokhu ivula umnyango omusha wokuphathwa kwayo yonke inkambo yesifo sikashukela, ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme kanye nensizakalo ehamba phambili kuyindlela yethu eyisisekelo neqhubekayo.
Ikhasi Langaphambili: I-SAA ne-CRP zisebenza ekuhlolweni kwe-Virus pneumonia (NCP) yenoveli
Ikhasi elilandelayo: AbakwaSinocare bahambele i-China (Hunan) Equipment and Production Ingena eCambodia Investment Expo '